Izindaba - Uyazazi zonke izinhlobo zaphansi?
Iphansi liyinto yaphansi engelula ukwenza amaphutha ekwakhiweni nasekufaniseni, futhi kunezinketho eziningi zokwenziwa kwaphansi, ngakho-ke namuhla ngizokuthatha ukuthi uqonde ukuthi yiziphi izinhlobo zaphansi ezitholakalayo.
Lo mbhalo uhlaziya ikakhulu izitezi ezine ezijwayelekile:
Izakhi Zokhuni Oluqinile (Parquet)
Isisekelo Esiqinile Sokhuni Oluqinile
Laminate zaphansi (Laminate zaphansi)
Eyodwa. I-Engineered Hardwood Flooring (Iphansi elihlanganisiwe lezinkuni)
Uhlobo lukathayela wokhuni oluqinile, imvamisa olwakhiwa izingqimba eziningana zamabhodi (ungqimba olungagqoki, ungqimba lokuhlobisa, ungqimba lwe-substrate ephezulu kakhulu, ungqimba lwebhalansi). Yize ingxenye eyinhloko ingukhuni, izinzile kakhulu kunokweleka okuqinile kokhuni: ngoba iphansi eliqinile lezinkuni licutshungulwe ngokukhethekile, alinayo inkinga yokuguquguquka okulula njengeplathi yendabuko eqinile yokhuni. Uma kuqhathaniswa nesendlalelo esiqinile sokhuni oluqinile, ukhuni oluqinile oluhlanganisiwe luncane futhi lunzima, kepha lunokudlulisa okuhle kokushisa futhi kulula ukulunakekela.
① Gqoka ukumelana nokucindezela process Inqubo elula yokufaka ③ Amaphethini amaningi ④ Kulula ukuyinakekela
①Akulungiseki ②Kunzima, ngakho-ke unyawo luzwa ukuthi luyoba lubi kakhulu. OmeEzinye izitezi zizosebenzisa i-formaldehyde glue, ngakho-ke kunenkinga yokukhishwa kwe-formaldehyde. Lapho ukhetha, kufanele ubone ukungalingani kwayo kwe-formaldehyde emission. Impilo: iminyaka engu-25-40 (uma inakekelwa kahle, ingasetshenziswa isikhathi eside)
ezimbili. Isisekelo Esiqinile Sokhuni Oluqinile
Ukhuni oluqinile, oluvela egameni lalo, akunzima ukucabanga ukuthi yiphansi elenziwe ngokhuni, ngakho-ke lizoba nobungani bemvelo futhi libe semvelo. Kodwa-ke, ngenxa yezakhiwo zemvelo zokhuni, iphansi elenziwe ngalo lizokhubazeka kalula futhi lingangeni amanzi. Noma abantu abaningi becabanga ukuthi ukhuni oluqinile luzothuthuka kakhulu, ukushiyeka kwalo akunakushaywa indiva.
IsIthambile, futhi umuzwa wonyawo uzothandwa ngabantu abaningi kuzo zonke izinhlobo zezitezi. EcNgenxa yokuthi ayikho iphethini elungisiwe, lonke iphansi liyafana futhi liphelele, ngakho-ke iphansi eliqinile lokhuni "lingavuselelwa" ngokupholisha.
EasyKulula ukunwaya ②Inkinga yokukhubazeka ebangelwa ukwanda okushisayo nokuncipha kubuye kube kubi kakhulu ③Akuwona amanzi ④Izinambuzane nezinambuzane
Isikhathi sokuphila: iminyaka engama-70-iminyaka eyi-100
ezintathu. Laminate zaphansi (Laminate zaphansi)
Iphansi lenziwe ngokhuni oluqinile oluphukile, lwacutshungulwa lwaba yifayibha yokhuni, lwabe selucindezelwa lwaba ukhuni emazingeni okushisa aphezulu njengezinto eziyisisekelo, lwabe selumbozwa ngogqinsi lokuhlobisa, ungqimba olunobufakazi bomswakama, njll. Kuvame kakhulu emakethe. Ngoba ishibhile futhi ayidingi ukunakekelwa okuningi, izosetshenziswa ekhaya noma ehhovisi ngamakhasimende afuna ukusebenza kwezindleko eziphezulu.
NeIngabizi ②Ukuqina okuphezulu nokumelana nomhuzuko oqinile ③Amaphethini ahlukahlukene stabilityUkuqina kokufakwa okuhle, asikho isidingo sokunaka kakhulu ukunakekelwa easyKulula kakhulu ukunakekelwa, phansi naphansi ngeke kufihle ukungcola nokungcola.
①Kuzoba nezinkinga ezinjenge-warping after blister ②Uzinyawo luzwa lukhuni qualityIkhwalithi ayilingani, kunzima ukuthola indawo esezingeni eliphezulu izinkinga
ezine. IVinyl Flooring (ipulasitiki)
Uhlobo lwesitezi esithuthuke kancane eminyakeni eyishumi edlule. Abantu abaningi abazi okuningi ngalolu hlobo lwaphansi. Uma kukhulunywa ngophansi we-vinyl, bazowuhlobanisa nesikhumba saphansi, imigwaqo yezindiza epulasitiki, njll. Ngeke nje kuphela bakhathazeke ngezinkinga zokuvikelwa kwemvelo, kepha futhi bazozizwela ngokungathandi ukuthi ingahle ibe nokunambitheka okusindayo. .
Kepha empeleni, into eyinhloko yokwenziwa kwepulasitiki yi-polyvinyl chloride, into esetshenziswe kakhulu ezimpilweni zethu. Isibonelo, imishini eminingi yezokwelapha isebenzisa i-polyvinyl chloride.
Ukwehliswa kwepulasitiki, okwaziwa nangokuthi i-PVC flooring, kuhlukaniswe cishe ngaphansi kwe-Traditional Vinyl Flooring (isendlalelo sepulasitiki sendabuko) kanye ne-Rigid Core Vinyl Flooring (i-hard core flooring flooring), ne-hard core flooring floor ihlukaniswe yaba yi-WPC (izinkuni zepulasitiki) ne-SPC ( flooring yamatshe). Phansi) izinhlobo ezimbili, futhi kulezi zinhlobo ezimbili, zombili ngokuvikelwa kwemvelo nekhwalithi, i-SPC ingcono:
①Ukuqina okumelana nokucindezela ②Slip-proof ③Flame retardant ④Ukungena kwamanzi nobumswakama insulationUkufakwa komsindo (ukumunca umsindo we-20dB) maintenanceUkulondolozwa okulula nokunakekelwa okulula
EUkwesaba ukuklwebheka ngamathuluzi abukhali
Lokhu okungenhla yizinhlobo ezivame kakhulu zezitezi emakethe. Eqinisweni, cishe akunakwenzeka ukuthola ifulethi elinentengo ephansi nekhwalithi enhle, hhayi impilo yensizakalo ende kuphela, kepha futhi ngaphandle kwesondlo. Ungaqonda isitezi ngasinye ngokuya ngomcimbi. Izici zephansi: inqubo yokufaka, izinto ezithinta ezemvelo, noma ngabe azinamanzi noma zinomswakama, njll, ngokususelwa kulo lonke ulwazi olungenhla, ngikholwa ukuthi ngingancoma indawo efanelekayo yawo wonke umuntu.